Ny nosy tsara indrindra any Karaiba, hoy ny USA Today | Vaovao momba ny dia
Ny nosy tsara indrindra any Karaiba, hoy ny USA Today
Rehefa manontany ahy ny tsara indrindra izy ireo Morontsiraka Karaiba Tonga hatrany amin'ny fehin-kevitra izahay fa isaky ny nosy na firenena Karaiba dia ho hitanao io paradisa kely io amin'ny endrika rano mangarahara, fasika fotsy ary karatra paoma sy voanio. Izany no antony ankanesantsika anio any amin'ny gazety amerikana USA Today, izay nanao lisitra iray izay itatanany ireo toerana ahafahanao mahita ny morontsiraka Karaiba tsara tarehy indrindra.
Voalohany indrindra dia mitanisa amalona, faritany britanika kely ao amin'ny Lesser Antilles 20 kilometatra monja ny halavany. Eo amoron'ny morony isika dia mahita tora-pasika 33 tsara indrindra hankafy ny masoandro amin'ny fomba milamina na hanao fanazaran-tena amin'ny fanatanjahantena rano. Faharoa ananantsika ao Aruba ary ny morontsiraka avaratra-andrefana, feno moron-dranomasina, rojo fandraisam-bahiny, kabine hofaina eny ambonin'ny rano sy ny hakanton'ny Valan-javaboary Arikok.
Ireo roa ireo dia narahin'ny nosy 700 nosy Bahamasy, izay manolotra cocktail mahafinaritra amin'ny morontsiraka misokatra, lava-bato miafina, paradisa virjina, ala honko ary haran-dranomasina. Amin'ny ankabeazan'izy ireo dia misy rivo-piainana mahafinaritra na andro na alina. Zavatra mitovy amin'ny mitranga ao Barbados, izay mizara eo amin'ny morontsiraka atsinanana, izay misy mpitaingin-tsoavaly sy mpitady fitsangantsanganana, ny morontsiraka mangina andrefana ary ny hantsana mahafinaritra amin'ny morontsiraka atsimo.
Ny iray amin'ireo morontsiraka lehibe indrindra any Karaiba, izay mihoatra ny folo kilometatra ny halavany, dia miorina eo amin'ny nosy Grand Cayman. Izy io dia ny Seven Mile Beach, izay ahitantsika rano turquoise handro na hisitrihana, hotely, casino, trano fisakafoanana ary izay rehetra tadiavintsika. Akaikin'i Bahamas no misy anay Nosy Turks sy Caicos. Ny iray amin'ireo lehibe dia ny Nosy Providenciales sy ny Grace Bay Beach, iray amin'ireo paradisa lehibe any Karaiba. Ny rano marivo ao aminy dia mety ho tonga fianakaviana.
Ary farany, ny Nosy virjiny ary ny valan-javaboary mahafinaritra, indrindra ny faritra Trunk Bay, ary ny nosin'i Culebra sy Vieques ao Puerto Rico. Ireto farany dia rakotra hatsaran-tarehy voajanahary goavambe ary ahafahantsika mankafy misitrika scuba, mandeha an-tongotra na bisikileta ary manao dia an-tsambo mandritra ny ala mikitroka.
Fanazavana fanampiny - Morontsiraka Karaiba mahafinaritra, ao Aruba
Sary - Famandrihana maro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny nosy tsara indrindra any Karaiba, hoy ny USA Today
Basilica mahavariana an'ny Saint Pius X ao Lourdes
Fitsidihana fohy any Portimao